ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: စင်္ကာပူမှာ ဝေတဲ့နှင်း
အရင်နေ့နဲ့ စာရင် ဒီနေ့ ပိုဆိုးလာသလိုပဲ...
ကဲပါလေ... မထူးပါဘူး... ကိုပေါ ပြောသလို ဆေးလိပ်လေးပဲ ဝယ်သောက်ကြတာပါ့...း))
ဟာ...အ ကျိုး နည်း ၊ သေ စမ်း ငါ တော် တော် တုံး တာ ပဲ ။ မ သိ ပေါင် ဗျာ ၊ မ နေ့ က အ လုပ် က နေ သိပ် မ ဝေး လှ တဲ့ အိမ် ကို လမ်း လျှောက် ပြန် လာ တယ်၊ ပြန် တာ နောက် ကျ တော့ တော် တော် တောင် မှောင် နေ ပြီ ၊်စိတ် ထဲ မှာ တော် တော် လေး ကို ကြည် နူး သွား တာ က လား ။ ဘယ့် နှယ့် .. နှင်း လေး တွေ ကျ နေ ပါ လား ပေါ့ ။ အမ် မယ် လူ က ခန္ဓာ ကိုယ် လေး ကို တောင် ကြုံ့လိုက် သေး တယ် ။ ကို ထီး ရဲ့ " နှစ် တိုင်း ကြုံ ကာ နေ မယ် ၊ ဟေ မာန် ဆောင်း ရဲ့ ဒီ အလွမ်း ရယ်....မ ငို ချင် ဘူး.. ဒီ ဆောင်း တ ည တော့ မ ငို ချင် ဘူး " သီ ချင်း ကို တောင် ဆွဲ ဆွဲ ငင် ငင် အူ လိုက် မိ သေး တာ၊ နှင်း ထဲ မှာ လေ .. အိမ် ပြန် ရောက် မှာ တောင် မ လို လား လို့ လမ်း ကို တောင် ဖြည်း ဖြည်း လျှောက် လိုက် သေး တယ် ( ခွီး... ခွီး... :D )။ ကြည့် စမ်း အ ခု မှ သိ တယ် ၊ အဲ့ ဒါ အင် ဒို က တောင် ယာ ရှို့ တဲ့ မီး ခိုး တွေ တဲ့ လား ။ သေ လိုက်၊ သေ လိုက် ..။ :-/
ကျွန်တော် လည်းမြူတွေဆိုင်းနေတယ်ပဲထင်တာ။ အခုမှ သိတယ်။
ဟုတ်တယ်.... မသက်ဝေ... ဒီကနေ့ အပြင်ထွက်လိုက်တော့ မီးခိုးနံ့ကလေးတောင် ရလိုက်လို့... “ယာတကြော...သာမောဖွယ့်တလီ... ထယ်ထိုးကြ...မီးခိုးက တလူလူဝေသည်” ဆိုတဲ့ ဝင်းဦးသီချင်းလေးတောင် ညည်းဖြစ်လိုက်သေးတယ်။
Morris.... အဲလို တလွဲလေး အမှတ်မှားနေတာကမှ ရင်ခုန်စရာကောင်ဦးမယ်ဗျိုး။ လွမ်းတေးကို သီဆိုရင်း ကိုယ်ဆုတောင်း နေတယ် အချစ်ရယ်.... မငိုချင်ဘူး... ရွှတ်... ဒီဆောင်းတညတော့ မငိုချင်းဘူး.....
ကို မိုးတိမ်ညို တယောက် အရင်နှစ်က မီးခိုးဝေတာကို သတိမထားလိုက်မိဘူး ထင်တယ်။
ဟုတ်ပါရဲ့ လွန်ခဲ့ ၄ နှစ်ကျော်လောက်က အဲဒီ Haze တွေ အရမ်းဆိုးပြီး အသက်ရှု ကျပ်လာလို့စင်္ကာပူက တောင် ထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားသေးတယ်။
Hinnn! Zaw Myo Ka le , Lu Zooo !!
Paw ka yuu chinn yaung Saug Nay dar par soo.
Nga Paw (B) South Yuu
It's not fog it's called smog.
Today ..Air quality of SG @ 1PM : 72 PSI ( still in moderate range )
The three-hour Pollutant Standards Index (PSI) recording climbed to 108 as at 6pm, much higher than the 80 on Wednesday, which was the worst recording since 2006 when Singapore was last blanketed by the severe haze.
ကိုပေါရေ ... ဒီနေ့ညနေက ၁၀၈ အထိ တက်သွားသတဲ့။ ၂၀၀၆ ကတည်းက အမြင့်ဆုံးတဲ့။ အင်္ဂါနေ့ကတည်းက အပြင်မှာ haze တွေ များလိုက်တာဆို အပြင်ထွက်ကြည့်တာ တကယ်မီးခိုးနံ့ရလို့ အံသြသွားတယ်။ ဆူမက်ထြားကလူတွေ ဘယ်လိုနေလဲမသိ။